Jaamacada Carabta oo ka shirtay Daacish - BBC News Somali
Jaamacada Carabta oo ka shirtay Daacish
Image caption Ururka Jaamacada Carabta oo shiraya
Wasiirada arrimaha dibada ee ururka Jaamacada Carabta ayaa isku raacay in ay qaadaan tallaabooyin muhiim u ah ka hortaga ururka la magaca baxay khilaafada Islaamiga.
Wasiirada ayaa sidoo kale ku heshiiyay in gobolka iyo caalamkaba ay iska kaashaadaan ka hortaga ururkaasi.
Fariinta kasoo baxday kulanka ay wasiiradda arrimaha dibada ee Jaamacada Carabta ku yeesheen magaalada Qaahira, ayaa dhiiri galin u noqonaysa Madaxweynaha Mareykanka, Barack Obama, oo doonaya in uu dejiyo qaabka uu dalkiisa uga hortagi lahaa dagaalyahannada Daacish.
Waxaa sidoo kale la soo dhaweyn doonaa go’aanka ay wasiiradu ku taageereen qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu dhawaan ka soo saaray joojinta saadka ciidan iyo dhaqaalaha la siiyo ururka Daacish.
Waxaa la aaminsan yahay in ururka Daacish uu dhaqaalo badan ka helo shakhsiyaad maalqabeen ah oo u dhashay dalalka Khaliijka.
Dalalka Khaliijka ayaa hadda sheegaya in ay diyaar u yihiin ka hortaga Daacish, balse su’aashu waxa ay tahay in dalalkaasi ay iska kaashaan doonaan la dagaalanka ururkaasi, halkii ay iyagu iska ximin lahaayeen.
Tusaale ahaan, dalalka Sacuudi Carabiya iyo Qadar ayaa dhaqaale badan ku bixiyay jabhadaha dagaalka kula jira xukuumadda Suuriya ee uu madaxda ka yahay Bashar Al-Asad, waxaana dhaqaalahaasi ka faa’iideystay oo ku xoogeystay ururka Daacish.
Su’aasha kale ee muhiim ah ayaa ah sida dalalka Carabta Sunniga ah ay ula safan karaan dalka Shiicada ah ee Iran.
Iskaashiga dalalka kala aaminsan labadaasi mad-hab ee Islaamka ah, ayaa muhiim u ah jabinta Daacish, waxaana uu xaalka u muuqdaa in loo baahan yahay isu tanaasul ka dhaca Bariga dhexe si looga adkaado ururka Daacish.